बजेट लेखनमा व्यस्त अर्थ मन्त्रालय : यी कर्मचारीले लेख्दैछन् बजेट ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > बजेट लेखनमा व्यस्त अर्थ मन्त्रालय : यी कर्मचारीले लेख्दैछन् बजेट !
बजेट लेखनमा व्यस्त अर्थ मन्त्रालय : यी कर्मचारीले लेख्दैछन् बजेट !
काठमाडौं । आगामी बिहीबार (जेठ १५) सरकारले आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को बजेट ल्याउँदैछ । बजेट लेखनमा अर्थ मन्त्रालय यतिबेला व्यस्त छ ।
तर अघिल्ला वर्षजस्तो मन्त्रालय वरपरका माहोलमा चहलपहल छैन । लकडाउनका कारण मन्त्रालयका कर्मचारी बाहेक बाहिरी मानिसको आवागमन शुन्य प्रायः छ । यस मानेमा पनि अर्थमा डिस्टर्ब छैन ।
बजेट लेखनमा अर्थ मन्त्रालय भित्रैका विभिन्न महाशाखाका प्रमुखको सक्रियता छ । उनीहरुले बजेट लेखनलाई तीब्रता दिएका छन् । बजेट लेखनमा बजेट महाशाखा, राजस्व महाशाखा, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा, अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख लगायत संलग्न छन् ।
बजेट लेखनमा अर्थमन्त्रीको सक्रियता त हुन्छ नै तर अहिले सरकारले आफ्नो प्रवक्तासमेत राखेकाले उनलाई दोहोरो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने छ । यद्यपि बजेट लेखनमा मार्ग्निर्देशन भने उनले दिइरहेकै छन् ।
अर्थका एक अधिकारीका अनुसार बजेट लेखनको संयोजन श्रीकृष्ण नेपालले गरेका छन् । उनी अर्थ मन्त्रालयकै अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख पनि हुन् । बजेट लेखनमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव द्वय शिशिर ढुंगाना र रामशरण पुडासैनी पनि छन् ।
ढुंगाना अर्थसचिव हुन् भने पुडासैनी राजस्व सचिव हुन् । उनीहरुले बजेट लेखनमा सल्लाहकारको भूमिका निभाइरहेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागबाट सरुवा भएर आएका यज्ञ प्रसाद ढुंगेल पनि बजेट लेखन टिममा छन् । उनी राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख हुन् ।
यस्तै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा बजेट लेखनका सदस्य हुन् । यसअघि उनी ठुला करदाता कार्यालयमा थिए । आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखा प्रमुख यमलाल भुषाल र वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख झक्क प्रसाद आचार्य पनि बजेट लेखन टिममै छन् । आचार्य यसअघि मध्यस्तरीय करदाता कार्यालयमा थिए ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकबाट काजमा अर्थमन्त्रालय तानिएका रामशरण खरेलले पनि बजेट लेखनलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । यद्यपि, सो टिममा उनको नाम भने छैन ।
कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधि नहुँदा सरकारको राजस्व प्रभावित छ । यसले स्रोतमै सकस परेपछि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा अनुदान परिचालनमै सरकारले जोड दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
अर्थमन्त्रीले विभिन्न दाताहरुसँग सहयोग समेत मागिरहेका छन् । उनले परम्परागत सहयोग नभइ नयाँ ढंगबाट सहयोग गर्न पनि यसअघि दातासँगको भिडियो कन्फेरेनसमै भनेका थिए ।
अर्थ समितिले १७ खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउन सुझाव दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले यस पटकको बजेट कोरोनाबाट क्षति भएको क्षेत्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर बनाइरहेको ती अधिकारीले बताए ।
उनले भने, ‘अहिले स्रोतमै समस्या परेको बेला कतिपय नराखी नहुने र कतिपयलाई निरन्ततार दिनुपर्ने कार्यक्रम छन् । त्यसबाहेक कोरोनाले गरेको क्षतिको पुनरुत्थान पनि गर्नु पर्नेनै छ । सानो आकारको बजेट भनेपनि केही बढ्लाकी भन्ने पनि देखिएको छ तर अन्तिममा केही कार्यक्रम काटिन पनि सक्छ । ’
जेठ २ गते राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेकी छन् । यसले कृषि स्वास्थ्य र कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानमा जोड दिने भनेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट आउने हो । तर नीति तथा कार्यक्रम नै लामो भएपछि कसलाई कार्यान्वयन गर्ने कसलाई नगर्ने चुनौती मन्त्रालयलाई थपिएको छ । (रातोपाटीबाट साभार)
२०७७ जेष्ठ ११ गते १३:५५ मा प्रकाशित
क्वारेन्टाइनमै घरेलु मदिरा !
शनिबार सबैको लघुवित्तको एजीएम, बोनसपछि फेरि १००% हकप्रद
हिमालय एयरलाइन्सको तेस्रो जहाज आयो, युरोप र अमेरिका उडान गर्ने तयारी
कोरोना महामारी : युरोपमा मात्र १ लाख बढीको मृत्यु
फेरि आयो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लिखित नतिजा, को-को भए उत्तीर्ण ? (नामावलीसहित)
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिने कारण पठाउने आज अन्तिम दिन